အသားအရေကို မွဲခြောက်ညစ်နွမ်းစေတဲ့ အချက် (၆) ချက် – YANGON STYLE
အသားအရေကို မွဲခြောက်ညစ်နွမ်းစေတဲ့ အချက် (၆) ချက်
ရေဓါတ်မပြည့်ဝလို့ အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်း က ပုံမှန်ဖြစ်နေကျအသားအရေပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့် ဂရုစိုက် ထိန်းသိမ်းမှုတွေ မလုပ်ဘူးဆိုရင် Eczema -နှင်းခူး ယားနာအထိ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းက ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့ လက္ခဏာလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
အရေပြားတွေ တင်းနေပြီး နေရထိုင်ရခက်စေတာမို့ စိတ်ကိုပါအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ အရေးအကြောင်းနဲ့ အမာရွတ်များ ဖြစ်ဖို့လွယ်ကူလာပြီး အိုမင်းရင့်ရော်မှု ပိုမိုမြန်ဆန်နိုင်ပါတယ်။
အသားအရေခြောက်ခြင်း က နီမြန်းကွဲအက်ခြင်း၊ယာယံခြင်း နှင့် ကြမ်းရှခြင်းများကို ဖြစ်စေသလို အသားအရေ ကစိုပြေမှုမရှိတာမို့ မွဲခြောက် ညစ်နွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ အရေပြား နီမြန်းကွဲအက်တာကတစ်ဆင့် သွေးထွက်ခြင်း နှင့် ပိုးဝင်ခြင်းတို့ အထိ ဆိုးရွားနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအရာတွေက အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာလဲ?
1. အများအားဖြင့်တော့ လွန်ကဲတဲ့ အေးခြင်း၊ ပူခြင်း ရာသီဥတုများကြောင့် အရေပြားအတွင်း ရေဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စွမ်းမရှိတာကြောင့် အသားအရေကို ခြောက်သွေ့စေပါတယ်။
2. ရေနွေးပူပူနဲ့ ရေချိုးခြင်းက လည်း အညောင်းအညာပြေ လန်းဆန်စေပေမယ့် အသားအရေကို ခြောက်သွေ့ကြမ်းရှ စေနိုင်ပါတယ်။
3. ကလိုရင်းခတ်ထားသော ရေကူးကန်မှာ ရေကူးခြင်းကလည်း အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
4. Cosmetic အပြင်းစားများ၊ မျက်နှာသစ်ဆေး အပြင်းစားများ၊ ဆပ်ပြာအပြင်းစားများက အရေပြားမှာရှိတဲ့ အဆီများအားလုံးကို ကို ဖယ်ရှားပစ်လေ့ရှိတာမို့ အရေပြားအဆီဓာတ် ခမ်းခြောက်ပြီး အသားအရေကို ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းစေပါတယ်။
5. မိတ်ကပ်သေချာမဖျက်ခြင်းနှင့် မိတ်ကပ်နေ့စဉ်လိမ်းခြင်း တို့ကလည်း အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ မိတ်ကပ်အကြွင်းအကျန်များက ချွေးပေါက်များကို ပိတ်စေပြီး အရေပြား elasticity ကိုလျော့ကျစေကာ Oxygen အလုံအလောက်မရရှိပဲ အရေးအကြောင်းများ အရေပြားခြောက်သွေ့ကွဲအက်ခြင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
6. အရေပြားကို ပွတ်တိုက် အသုံပြုရသော Scrubများကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် Scrubbing လုပ်ပြီးချိန်မှာ နေရောက်ထိတွေ့ခြင်းကလည်း အရေပြား အစိုဓါတ်နှင့် အဆီဓါတ်ကို ခမ်းခြောက်စေရုံသာမက ထိလွယ်ရှလွယ်ပြီး မဲညစ် ခြောက်သွေ့စေပါတယ်။
အခုပြောပြပေးခဲ့တာတွေကတော့့နေစဉ်ဘဝမှာလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အရေပြားခြောက်သွေ့စေတဲ့ အလေ့အထများပဲဖြစ်ပါတယ်။